Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi > Amanyikwe
Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi
Konke okuqukethwe kwe-iLive kubuyekezwa ngochwepheshe bezokwelapha ukuqinisekisa ukunemba okuphezulu kakhulu nokuvumelana namaqiniso.
Sinemithetho eqinile yokukhetha imithombo yolwazi futhi sibhekisa kuphela kumasayithi amahle, ezikhungweni zocwaningo zezifundo futhi, uma kunokwenzeka, ucwaningo lwezokwelapha olufakazelwe. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi izinombolo ezisebakaki (, njll.) Ziyizixhumanisi ezisebenzisanayo nezifundo ezinjalo.
Uma ucabanga ukuthi noma yiziphi izinto zethu zokwakha azilungile, ziphelelwe yisikhathi noma zingabazeki, zikhethe bese ucindezela u-Ctrl + Enter.
Ukudla i-pancreatitis eyingozi iqoqo lemithetho eqinile okufanele ilandelwe. Ake sihlolisise izici zokudla okunempilo zesifo se-pancreatic.
I-pancreatitis isuselwa ekuphazamisekeni kwama-pancreas. I-pancreatitis ye-acute ibonakala ngokuthi ama-pancreas aqala "ukuzidla" uqobo, yingakho i-pancreatic necrosis. Kunezizathu eziningi. Isiguli kufanele siqonde ukuthi uma ungalandeli imithetho yezondlamzimba, imiphumela yesifo ingaba yingozi.
Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi kubhekwe ngokuqinile, kuhloswe ngayo ukubuyisa umsebenzi wamanyikwe. Amanyikwe adlala indima enkulu emzimbeni womuntu. Ikhiqiza ama-enzyme asiza umzimba ukuthi ungenise amaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate. Nge-pancreatitis, ukukhiqizwa kwe-insulin kukhubazekile, okusongela ukukhula kwesifo esinjengoshukela.
Izimbangela ze-pancreatitis esibuhlungu:
Amatshe ku-gallbladder, ukuphuma okukhubazekile kwe-bile, ukususwa kwe-gallbladder.
Imiphumela emibi yezidakamizwa ezithile.
Isizinda se-hormonal esiphazamisekile.
Ukusetshenziswa ngokweqile kokudla okunamafutha.
Ukwelashwa kwe-pancreatitis eyingozi ngokudla
Ukwelashwa kwe-pancreatitis eyingozi ngokudla kungenye yezindlela zokuqeda lesi sifo. Ukwelashwa kufanele kwenzeke esibhedlela noma esibhedlela ngenxa yokuhlolwa kukadokotela wendawo noma udokotela ohlinzayo. Ezinsukwini zokuqala ngemuva kokuhlaselwa, udokotela unquma ukuzila ukudla okuqinile kusuka ezinsukwini ezintathu kuya kweziyisithupha. Ungasebenzisa kuphela amanzi ngaphandle kwegesi, kumaswidi amancane. Ukubulawa yindlala kuya ngokuthi ubukhali bokuhlaselwa. Lokhu kuyadingeka ukuze ungazizwa ulambile, ubuthakathaka, nobuhlungu. Udokotela wenza ukwelashwa kwezidakamizwa ukuze asuse izinhlungu, abuyisele ama-pancreas futhi asekele umzimba.
Udokotela unquma ukulethwa kwegazi nokuhlolwa komchamo ukuze uqaphe njalo ama-encyme e-pancreatic. Lapho nje ama-enzyme engancishiswa, udokotela unweba ukudla. Isiguli singasebenzisa umhluzi wemifino, itiye elibuthakathaka, i-kefir (engenamafutha noma enokuqukethwe kwamafutha ayi-1%). Izinsuku ezingama-2-3 ngemuva kokunwetshwa kokudla, udokotela angaveza eminye imikhiqizo. Isibonelo: amakhiqizi enziwe inyama yenkukhu noma yenkomo, yoghurt, isobho elinokhilimu kusuka kumazambane, ukholifulawa, izaqathi. Isiguli kufanele sidle amahlandla ama-4-6 ngosuku, ezingxenyeni ezincane, ukuze singasebenzisi umthwalo wamanyikwe, futhi singavuseleli ukuphinda sihlasele.
Kuyini ukudla kwe-pancreatitis ebaluleke kakhulu?
Ezigulini eziningi ezihlaselwe yilesi sifo, umbuzo ungaphakama: "Kuyini ukudla kwe-pancreatitis ye-acute?". Lapho evela esibhedlela, udokotela ovame ukubeletha unikeza isiguli ithebula No. 5. Lokhu kudla kuzokwenza ukuthi umzimba obuthakathaka uthole amandla, izakhamzimba, amavithamini nezinye izinto ezisebenzayo zokulandela umkhondo. Ukudla kunciphisa umthwalo esitho esonakalisiwe, esisusa ukungaphatheki kahle kanye nengozi yokuhlaselwa okwesibili kwe-pancreatitis ebukhali.
Leli thebula liqukethe yonke imikhiqizo edingekayo. Imvamisa, izitsha ezilungiselelwe ngokuya ngezincomo zokudla okungu-5 ziqukethe imifino eningi, izithelo ezintsha, imifino yezikhathi ezithile, usawoti omncane noshukela, imikhiqizo eminingi yezilwane, njengoku:
Ushizi wekotishi (amafutha aphansi).
Ushizi onzima onamafutha amancane.
Amaqanda (hhayi ngaphezulu kwesisodwa ngesonto).
Ubisi olunamafutha amancane.
Inyama yenkukhu, unogwaja, iwundlu, isudu.
Ukudla 5 kwe-pancreatitis ebaluleke kakhulu
Imvamisa, ekudleni oku-5 kwe-pancreatitis ebukhali kuchazwa ngudokotela oholayo ezigulini ezinezifo ezifana:
I-pancreatitis (i-acute, chronic).
Izifo ze-gallbladder ne-bile ducts.
Izilonda zamathumbu amakhulu namancane (i-peptic ulcer).
Lokhu kudla kusiza ukwehlisa umthwalo ephepheni lokugaya ukudla futhi kwehlise umthwalo esithweni esilimele. Ngokudla, ukuthethelelwa kwenzeka, ukungajabuli kanye nobuhlungu esonweni esonakele kuyancipha noma kunyamalale. Iz Enzymes zibuyela kokujwayelekile. Inani elikhulu lamaprotheni lingena emzimbeni, inani lamafutha kanye nama-carbohydrate ayancipha.
Lokhu kukuvumela ukuthi wehlise isisindo ngaphandle kokuzivocavoca ngokomzimba. Kepha ngalokhu udinga ukunamathela ngokuqinile ekudleni, ungadli ngokweqile, udle ngokweqile izikhathi ezingama-4-6 ngosuku ngezingxenye ezincane. Ungakhohlwa ngamanzi. Amanzi kufanele abe ngaphandle kwegesi. Udinga ukuphuza okungenani amalitha ayi-1.5-3 ngosuku, ngaphandle kokudla koketshezi. Le mithetho emincane izosiza isiguli ukubeka umzimba wayo ngokuhlelekile, sithuthukise isitho sokugaya ukudla kanye nesitho esonakele, senze amazinga e-hormone ajwayelekile.
Ukudla ngemuva pancreatitis oyingozi
Ukudla ngemuva kwe-pancreatitis eyingozi - imvamisa lokhu kungukudla kwenombolo 5, udokotela ekuyalela ukuthi usesibhedlela noma ekhipha isiguli. Imikhiqizo equkethe kulokhu kudla inothe ngamaprotheni adingekayo ukuze umzimba ube buthaka. Ukudla okunjalo kuzovumela umuntu ogulayo ukuthi abuyisele ngokushesha umzimba emuva kwesejwayelekile, ukungena ngesigqi esivamile sempilo.
Izitsha kufanele zibambe noma zibiliswe. Ngosizo lobuchwepheshe besimanje, iziguli zingenza impilo yazo ibe lula. Izinto zasekhishini ezifana nompheki ohamba kancane, ib boiler kabili, iprosesa yokudla isiza ukunciphisa isikhathi sokupheka nokwenza indishi ibe mnandi futhi inempilo. Into esemqoka ukuthi ngemuva kokunambitha isidlo esinjalo, umuntu ogulayo akhohlwe ngezinkinga nezifo zakhe futhi uyakujabulela ukudla okuphekiwe.
Ngesikhathi sesifo, kufanele ushintshe kakhulu indlela yakho yokuphila. Isiguli sidinga ukubekezela okukhulu nokuqina ukuze sinamathele kuyo yonke leyo mikhawulo esungula ukusebenza komzimba ngokuphelele. Into esemqoka kungukuthi uphelelwe yithemba, ngoba lokho kudla kukuvumela ukuthi uphile impilo enempilo, kunciphisa ingozi yezifo ezintsha ezinjengokuthi:
Ukuphazamiseka kwesizinda se-hormonal.
Ukuhlaselwa yisifo senhliziyo, unhlangothi.
Ungakhohlwa ukuthi i-pancreatitis akuyona isigwebo sokufa. Ungadla futhi ukudla okumnandi, uholele indlela yokuphila esebenzayo. Iya ejimini, vakashela indawo yokubhukuda, uchithe uhambo lokuhamba ngezinyawo. Lokho wukuthi, uziphathe njengomuntu osebenzayo, onempilo.
Ukudla ngemuva kokuhlaselwa yi-pancreatitis eyingozi
Ukudla ngemuva kokuhlaselwa kwe-pancreatitis ebukhali kuyinkimbinkimbi yezinyathelo ezihlose ukubuyisela umsebenzi we-pancreatic. Ukudla kukuvumela ukuthi unciphise i-cider yobuhlungu, yenza ama-indices we-pancreatic enzyme ajwayelekile.
Isiguli kufanele sidle kuphela ukudla okusha, okunamafutha amancane, okunempilo. Lokhu kuzosiza umzimba ogulayo ukuthi ululame. Imikhiqizo kufanele ibe nenani elikhulu lezakhamzimba namavithamini. Ekudla, isiguli kufanele sidle amaprotheni amaningi, sinciphise inani lama-carbohydrate namafutha.
Ngemuva kokuphuma esibhedlela, udokotela unquma inamba yokudla 5. Izitsha zivame ukufana nokudla okwenziwe ngemifino ngenxa yobuningi bamakhambi, imifino emisha nezithelo, okungukuthi, imikhiqizo yezitshalo. Kepha lokhu kudla kufaka nemikhiqizo yenyama ekuvumela ukuthi unikeze umzimba ngamaprotheni.
Ukudla kufanele kubiwe, kubhakwe noma kubiliswe. Izitsha kufanele zidliwe kuphela zifudumele. Kuyelulekwa ukuthi ungasebenzisi izitsha ezishisayo nezibandayo. Izinongo, ushukela nosawoti kufanele kube nomkhawulo ekusetshenzisweni. Amakhambi amasha angasetshenziswa ukulungisa ukudla, okuzosiza ukuguqula ukunambitheka kwezitsha.
Imenyu yokudla kwe-pancreatitis eyingozi
Imenyu yokudla kwe-pancreatitis eyingozi ihlukahlukene kakhulu. Masenze isibonelo semenyu yokudla yosuku olulodwa. Inani lokudla kufanele okungenani libe ezine ngosuku. Ungakhohlwa ukuthi udinga ukuphuza okungenani amalitha ayi-1.5 amanzi ngosuku. Inani lokudla okudliwayo ngosuku akufanele kudlule ama-3 kg.
Ingilazi yetiye elifudumele.
Ama-raspberries amasha nokhilimu omuncu.
Ipuleti le-oatmeal elinomisiwe nezithelo ukunambitha.
Ingilazi yejusi ye-karoti esanda kufakwa.
Ingilazi ye-birch sap.
Isobho se-cream of izaqathe nekholifulawa nge-parsley ne-cilantro.
Meatballs, fillet fish inhlanzi.
Ingilazi yetiye eliluhlaza nelamula ngaphandle koshukela.
Imenyu yayinhle, imnandi futhi inempilo. Lapho uhlanganisa imenyu, kufanele ukhumbule yonke leyo mithetho echazwe ngenhla. Lapho-ke imenyu nokudla kuzophumelela kube lusizo kakhulu, kuyamnandi futhi kuyanelisa.
Ama-Acute Pancreatitis Diet Recipes
Izindlela zokupheka zokudla kwe-pancreatitis ebukhali zingahlehlisa ukudla okulinganiselwe. Kunezindlela eziningi zokupheka, ezenza sikwazi ukulungiselela izitsha ezihlwabusayo, ezakhayo nezinempilo. Ake sibheke izindlela ezimbalwa zokupheka.
Thatha induku yesinamoni, amahlumela ambalwa weminti entsha, isiphuzo selamula kanye nezipuni zikaju. Engilazini yamanzi, faka uju, isinamoni kanye neminti, uthele konke ngamanzi abilayo. Cindezela ujusi omncane kalamula esiphuzweni, bese wehlisa isikhumba selamula engilazini nazo zonke ezinye izithako. Isiphuzo esinjalo sizosiza ukudlulisa kalula ukushisa kwehlobo, ukuqeda ukoma kwakho kanye nokwenza ngcono imizwa yakho.
Thatha isinamoni encane, i-nutmeg, isipuni soju kanye no-ingcosana we-ginger. Thela konke lokhu ngengilazi yamanzi abilayo. Isiphuzo siyasheshisa imetabolism futhi sithambisa umzimba ngokuphelele. Isiphuzo esinjalo siyasiza ikakhulukazi ekushiseni kwehlobo nasikhathi sokubanda, ngoba sithuthukisa imisebenzi yokuvikela amasosha omzimba.
Ukulungiselela isidlo, uzodinga izithako ezilandelayo: i-carp ehlutshiwe, ukhilimu omuncu, ushizi onzima, izaqathe, u-anyanisi nanoma yimiphi amakhambi ukunambitha. Sigcoba inhlanzi kahle ngamakhambi aqoshiwe ngaphakathi nangaphandle bese sigcoba ngamafutha ngo-ukhilimu omuncu. Uma kunokuluhlaza okuningana, khona-ke sibeka iqembu elincanyana esiswini senhlanzi. Sika imifino ngezindandatho ezingxenyeni, sifaka ushizi.
Kungcono ukubhaka inhlanzi kuhhavini eshidini lokubhaka nge-foil. Faka ingxenye yemifino ku-foil ungqimba, ubeke izinhlanzi ngaphezulu bese uyimboza ngemifino esele. Kuyadingeka ukuthi upheke i-carp imizuzu engama-30- 40 emazingeni okushisa angama-180-200 degrees. Imizuzu eyishumi ngaphambi kokulungela, ungqimba olungaphezulu lwe-foil kufanele lususwe futhi lufafazwe ngoshizi we-grated.
Ama-Steam Beef Meatballs
Ukuze upheke ama-meatballs uzodinga inyama yenkomo yasemhlabeni, iqanda eli-1 noshizi obhemayo. Hlanganisa iqanda noshizi ogayiwe enkomeni yenhlabathi. Senza amarobhothi amancane bese siwafaka ebhuthini eliphindwe kabili. Sibeka imodi oyifunayo bese silindela ukulungela. Ama-Meatballs angakhonzwa nge-buckwheat. Bayoba nokunambitheka okungafani noshizi obhemayo, okwangezwe kuyo inyama egayiwe.
Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi kungenye yezimo zokululama. Ukulandela imithetho yokudla nokulandela izincomo zezokwelashwa eziphathelene nokuzivocavoca ngokomzimba, ungabuyisa ukusebenza okujwayelekile komzimba nazo zonke izinhlelo zawo. Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi kuzoba wusizo njengendlela yokuvimbela abantu abanezifo ze-pancreatic nesibindi.
Yini engingayidla nge-pancreatitis eyingozi?
Yini engingayidla nge-pancreatitis eyingozi? - Lo mbuzo ubuzwa zonke iziguli zesibili ezihlushwa i-pancreatitis. Ake sibheke ukuthi yikuphi ukudla okungadliwa ngalesi sifo.
Abantu abaphethwe yilesi sifo bangadla ukudla okuboshiwe, okubilisiwe, okubhakiwe. Uma ungumthandi wezinhlanzi, lapho-ke kufanele ukhumbule ukuthi inhlanzi kufanele ibe izinhlobo ezinamafutha amancane. Isibonelo: i-cod, i-hake, i-pollock, i-pollock, i-perch, i-pike perch, i-bream, i-pike, i-roach, i-mullet, i-flounder.
Kubathandi benyama, ungayinkukhu, inyama yenkomo enamafutha amancane, unogwaja, inyama ye-turkey. Inyama enamafutha ayiluleki ukuba idle, ngoba lokhu kungavusa ukuqhubeka kwesifo noma ukuhlaselwa okusha.
Ungaphuza itiye (hhayi eqinile), i-kefir, ama-jusi, kepha angathengiwe Uma wenza ijusi elisanda kufakwa, ngaphambi kokuphuza, kufanele lihlanjululwe ngamanzi. Kungcono ukuthi ungasebenzisi kabi amajusi, ngoba acasula isisu sesisu futhi kungakhathaza ukungahambi kahle (i-belching, isicanucanu, ukucasuka).
Yini engeke idliwe nge-pancreatitis eyingozi?
Ake sibheke ukuthi yikuphi ukudla okunganconyelwanga izilonda zepancreatic. Abantu abahlaselwa yilesi sifo akufanele baphuze iziphuzo ezidakayo nezidakayo. Utshwala buyasuswa emzimbeni isikhathi eside kakhulu futhi buthinta izinqubo ze-metabolic. Ngakho-ke, odokotela bayenqabela iziguli ukuphuza utshwala.
Iziphuzo zekhabhoni nazo ziyaphulwa, ngoba zicasula amathumbu futhi zibangele ukuqhuma. Amajusi angajwayelekile ngokwemvelo ngokufakwa kwamadayi nokunambitheka kwe-flavour awathandeki. Abalandeli bekhofi ne-cocoa kuzodingeka bayeke iziphuzo ezinephunga elimnandi, kanye nemikhiqizo engahle ibe nobhontshisi we-cocoa.
Awukwazi ukudla imikhiqizo ye-confectionery, imikhiqizo yebhikawozi. Vele ungalahli ithemba, kunemikhiqizo eminingi eningayenza ngayo le mibango. Izitsha eziphekiwe zizoba zinambitheka nje, zimnandi futhi zibaluleke kakhulu ziphilile.
Khohlwa nge-pasta eyenziwe ngofulawa wekhwalithi ephansi. Izithelo nemifino evuthwa kuqala akunconywa ukuthi zidliwe, ngoba abagulayo yizo eziyingozi kakhulu. Ziqukethe inani elikhulu lama-nitrate nama-pesticides.
Khumbula, ukudla kwakho kufanele kube okunempilo futhi kulungiswe ngemikhiqizo emisha enezengezo ezincane nezinongo nosawoti. Ukudla okunjalo kuyasiza kakhulu kumzimba obuthakathaka, kumunwa ngokushesha, kuqukethe izingxenye eziningi zamaprotheni, futhi lokhu kuyasiza kakhulu kumanyikwe abagulisayo nabathintekile.
Izimiso eziyisisekelo zokudla No. 5-k
Ngosuku lwesithathu, isiguli sishintshela ekudleni okungunombolo 5-p, ohlinzeka ngesimo sokucophelela kuma-pancreas, aqinisekise ukuphumula okuhlelekile nangamakhemikhali.
Ukudla okunempilo kwesikhathi kuqukethe: Amagremu angama-80 wokudla kwamaprotheni, amagremu angama-40-60 wamafutha, amagremu angama-200 ama-carbohydrate, ukusetshenziswa kukasawoti kulinganiselwe kakhulu, okunomphumela omuhle ekuvuseleleni kabusha kwe-pancreatic.
Okwe-crescent, ukudla akunasawoti. Ukudla okunempilo kwi-pancreatic pancreatitis kwenziwa kathathu ngosuku, ngamanani amancane. Ukusetshenziswa kokudla okubandayo akuvunyelwe, ukudla kungoketshezi noma ukwakheka koketshezi ngendlela.
Kuyenqatshelwa ngokuphelele ukusebenzisa ukudla okufakiwe noma okuthosiwe. Ukudla okubilisiwe noma okunamakha, kashizi.
Ezinsukwini ezilandelayo, baqala ukukhulisa inani lamakhalori ekudleni kweziguli. Vumela ukusetshenziswa kwe-semolina noma i-porridge yerayisi, ekhonjisiwe: i-apula ebhakiwe, amazambane athosiwe, inkukhu enamafutha amancane, umhluzi wemifino, inhlanzi ebilisiwe noma inyama, i-cottage shizi casserole, itiye elimnandi, ukumiswa kwe-rosehip.
Isigamu senyanga ngemuva kokwanda kwalesi sifo, isiguli sidluliselwa ekudleni iNo 5-c. Ngemuva kokuhlaselwa, kuphakanyiswa ukudla okuqinile kwe-pancreatitis eyingozi ngaphakathi kwezinyanga eziyisithupha noma unyaka, okwandisa inani lama-kilojoule ekudleni.
Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi kuncishiswa ukusetshenziswa kokudla okungandile, okusha, okune-carb ephezulu. Ukudla kungeniswa kancane kancane: ushukela obunjiwe, imikhiqizo yezinyosi, iziphuzo zezithelo, i-rosehip kanye ne-currant infusion.
Ukwelashwa ngokudla okunjalo kubandakanya ukusetshenziswa kwe: ama-crackers avela kwesinkwa esimhlophe, amasobho avela ezinsolweni, ama-decoctions yemifino, amasobho wekhilimu yenyama.Ngasohlangothini lwenyama, kuvunyelwe okulandelayo: Izinhlobo ezinamafutha aphansi zenyama ezinkomeni, izinkukhu, ama-turkeys, onogwaja lapho okukhishwe khona ngokweqile. Kuvunyelwe ukusebenzisa ama-casseroles nama-mousses enhlanzi, amaqanda abilisiwe athambile kanye nama-omeleette aphekwe umusi. Ukusuka kubisi kuvunyelwe ukusebenzisa ama-curds, ama-casseroles, ubisi no-ayisikhilimu kufakwa ezitsheni.
Iqembu lemifino limelelwa ngamazambane, izaqathe, i-zucchini, i-inflorescence yeklabishi, ama-apula - izithelo abhakwe. Ukwelashwa kuvumela ukusetshenziswa kwelayisi, i-buckwheat, i-oatmeal ekudleni, ngezinga elithile kuvumela i-semolina, i-pasta. Kwe-dessert, compotes yesitashi, amaswidi jelly, mousses, izithelo puree zinikezwa. Okusuka eziphuzweni: itiye elibuthakathaka, elisamanzi, ukumnika i-rosehip, ama-compotes. Kuvunyelwe ukufaka uwoyela omncane ezitsheni.
Kwenqatshelwe ukusebenzisa isinkwa esimnyama, noma iyiphi i-confectionery. I-veto ifakwa kumhluzi ovela enyameni, enhlanzi, kumakhowe, kumasobho obisini, uphizi, ubhontshisi, amabele nokunye. Musa ukugula amadada kanye goose, isibindi. Ukusetshenziswa kwezinhlanzi ezinosawoti, ezibhemayo, nezithosiwe kanye nemikhiqizo yezinhlanzi esekheniwe, amaqanda athosiwe futhi abiliswe kanzima akuvunyelwe. Ngaphansi kokuvinjelwa, ubisi olusha, imikhiqizo yobisi ekhombisa i-acidity ephezulu.
Phakathi kwemifino, iklabishi, isithombo, isithelo, ugalikhi, isigaxa, amaqabunga esipinashi, isithombo, amaliki, ukhukhamba, upelepele, amakhowe, noma yimiphi ukhukhamba, ukhukhamba, ukuvunwa kwenqatshelwe. Kuvinjelwe futhi noma yiziphi izithelo namajikijolo ngendlela eluhlaza. Phakathi kokusanhlamvu, okungekho kugrata kubhekwa njengabantu: amabele, ummbila, ubhontshisi, ibhali, i-pasta.
Izimiso eziyisisekelo zokudla No. 5-c
Ukudla kwe-pancreatitis eyingozi ekudleni okubuthakathaka. Ukudla kuphuma kokuvinjelwe: i-omeledte enamafutha, ipate, amakhiqatha enkukhu asuka enhlanzini, isobho le-oatmeal noma isobho selayisi, imifino, usawoti oqoshiwe, iphalishi eligcotshisiwe kusuka ku-oatmeal, ilayisi, i-buckwheat, ama-apula aphekwe, zonke izinhlobo zama-compotes kanye ne-infusions , itiye lobisi, izinhlobo ezikhethiwe z ujusi.
Qala ukusebenzisa umhluzi wemifino, inyama engenantambo, yokuhlanza imithambo, imikhiqizo yenhlanzi ebilisiwe, ushizi wekhosishi, okuphekwe ekhaya nokudla kuwo, izitsha zokudla okusanhlamvu nezemifino, ujusi, ushukela, izithelo ezibilisiwe, imikhiqizo yezinyosi.
Ngaphambi kokulala, kuvunyelwe ukuthatha i-kefir, isiphuzo esivela kuju, sifakwe emanzini, izithelo ezomisiwe.
Kuyenqatshelwa ukudla okunamafutha, okuthosiwe, namabhanisi, ukhukhamba, ukubhema, ukhukhamba, ukudla okusemathinini, umhluzi ominyene, utshwala.
Ukudla okunempilo ezinganeni
Uhlobo olubi lwalesi sifo ezinganeni kufanele luphathwe ngendlela efanayo nasekwelashweni kwabantu abadala. Ukwelashwa empeleni kwenziwa emnyangweni wesibhedlela wezempilo, ingane idinga ukuzola ngokomzimba nangokwengqondo. Kunquma ukuphumula kombhede. Izinsuku eziningana, ingane iboniswa indlala, bese ukudla okuchithekile, kube buthaka njengoba ilulama.
I-pancreatitis ye-acute yisifo esingemnandi, esibuhlungu esithinta abantu abadala nezingane. Kulula ukukuvikela kunokulashwa isikhathi eside ngendlala.
Gcina i-athikili ukuze uyifunde kamuva, noma wabelane ngayo nabangani: